Dhallinyarada Gaalkacyo oo bilaabay Qorshe Gargaar loogu arruurinayo fatahaadda Baladweyne – Radio Muqdisho
Kullan ay isugu yimaadeen Dhallinyarada Galmudug iyo Punland ayaa magaalada Gaalkacyo ka dhacay, waxaana ay uga hadleen sidii ay si mideysan uga qayb qaadan lahaayeen Gargaarka loo sameynayo Bulshada gobolka Hiiraan ee uu saameynta kuyeeshay Fatahaadda Wabigga Shabeelle.
Masuuliyiinta Maamulada Galmudug iyo Puntland ee magaalada Gaalkacyo ayaa goobta joogay, waxaana ay shegeen in Dhallinyarada Gobolka Mudug ay bilaabayaan gurmad arruurinta nuucwalba leh oo ay ku caawinayaan walaalahooda kale ee sameeynta uu ku yeeshay Fatahaadda Wabigga.
Dhallinyarada ayaa magaalada Gaalkacyo iyo deegannada kale ee ka agdhow waxaa ay ka bilaabeen inay dadka kasoo aruuriyaan qofkasta wixii uu awoodo.
Magaalada Baladweyne ee xarunta Gobollka Hiiraan ayaa waxaa ku fatahay Wabigga Shabeelle waxaana arrintaas saameyn ku yeelatay dadkii magaalada deganaa oo u barakacay meel ka baxsan magaalada.
Golaha Aqalka sare oo guddi u saaray ka shaqeynta arrimaha Fatahaadda Wabiyada Shabeelle iyo Jubba “SAWIRRO”